mairie-antananarivo – Kaominina Antananarivo Renivohitra – Boriboritany Voalohany
administrateur 2 octobra 2018 Commentaires fermés
Fiatrehana ny fahavaratra sy fisorohana ny valan’aretina
Niara-nientana avokoa ireo mponina rehetra teny amin’ny Fokontany Ankasina ny andron’ny androany talata 02 Oktobra 2018 tamin’ny fanatanterahana ny asa fanadiovana faobe, izay nokarakarain’ny Boriboritany Voalohany, mba ho fiatrehana sahady ny fahavaratra sy ho fisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina. Tonga maro tokoa ireo mponina tamin’ity andro ity noho ny fahatsapan’izy ireo ny maha zava-dehibe ny voka-tsoa azo avy amin’ny fahadiovana.
Raha tsiahivina dia anisan’ny faritra iva sy mora tondraka eny amin’ity faritra ity, ka izay indrindra no antony hamerimberenana ny asa, tsy voalohany izao fa efa asa fanao matetika. Ankoatra ny teny amin’ny faritra Ankasina dia nodiovina ihany koa ny teny amin’ny 67Ha Afovoany Andrefana sy ny teny amin’ny faritra Avaratra Andrefana.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Boriboritany Voalohany Ramatoa RANDRIAMAHEFA Jenifère dia efa misy ny fandaharam-potoana manokana amin’ny fanatanterahana ny fanadiovana faobe manerana ny Fokontany 44 ary ho ezahin’izy ireo ho vitaina ao anatin’ny iray volana izany asa izany. Rahampitso dia faritra hafa indray no hodiovina.
Ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia manentana hatrany ny mponina amin’ny fanadiovana ny Tanàna ary anjaran’ny tsirairay kosa ny manohy sy mitandro izany fahadiovana izany satria dia Antananarivo madio sy milamina no tanjona.